တစ်ဦးနှင့် INTERNAL MEMORY ကို ANDROID အဖြစ် SD ကဒ် - MOBILE DEVICES - 2019
တစ်ဦးနှင့် internal memory ကို Android အဖြစ် SD ကဒ်
သင့်ရဲ့ Android 6.0 ပေါ်မှာဖုန်းသို့မဟုတ် Tablet ကို,7Nougat, 8.0 Oreo သို့မဟုတ် 9.0 Pie တဲ့မှတ်ဉာဏ်ကဒ်ဆက်သွယ်မှုများအတွက် slot ကရှိပြီး အကယ်. သင်သည်သင်၏ဖုန်းရဲ့ internal memory ကိုအဖြစ် MicroSD မှတ်ဉာဏ်ကဒ်ကိုသုံးနိုင်သည်, ဖြစ်နိုင်ချေကြောင့် Android ကို 6.0 Marshmallow ၌တည်ရှိ၏ပထမဦးဆုံးအကြိမ်အဘို့ထင်ရှား။ ,
ဒီလက်စွဲထဲမှာ - Android ရဲ့ internal memory နှင့်အဘယ်သို့ဆိုင်န့်အသတ်နှင့်တစ်ချိန်တည်းမှာရရှိနိုင်သကဲ့သို့, SD ကဒ် setting သည်။ တချို့ပစ္စည်းတွေကဒီ function ကို support မမှတ်ချက်, အန်းဒရွိုက်၏တပ်မက်လိုချင်သောအဗားရှင်းကြားမှ (က Samsung Galaxy, LG သော်လည်း, ထိုသူတို့အဘို့အပစ္စည်းအတွက်ပေးတော်မူလတံ့သောဖြစ်နိုင်တဲ့ဖြေရှင်းချက်ရှိ၏) ။ သင့်ရဲ့ Android ဖုန်းသို့မဟုတ် Tablet ကိုအပေါ်ပြည်တွင်းရေးမှတ်ဉာဏ်ရှင်းလင်းဖို့ကိုဘယ်လို :. ။ ကိုလည်းကြည့်ပါ
မှတ်ချက်: ကအခြား devices များတွင်အသုံးပြုရနိုင်မှာမဟုတ်ဘူးဒါကြောင့်တစ်ဦးမှတ်ဉာဏ်ကဒ်တွေကိုအသုံးပြုတဲ့အခါ - တနည်း တစ်ခုသာအပြည့်အဝ format နဲ့အပြီးဖယ်ရှား connect ကကဒ်စာဖတ်သူကနေတဆင့်သင့်ကွန်ပျူတာသို့ဦးမည် (သို့မဟုတ်မဟုတ်ဘဲ, ဒေတာကိုဖတ်) ။
Android ရဲ့ internal memory အဖြစ် SD ကဒ်ကိုသုံးပြီး
Samsung က LG က (နှင့်ပစ္စည်း setting များကိုမသည်အဘယ်မှာရှိအန်းဒရွိုက်6နှင့်အထက်နှင့်အတူအခြားသူများကို) အတွက်ပြည်တွင်းရေးသိုလှောင်ရေးကိရိယာအဖြစ်မှတ်ဉာဏ်ကဒ်ကို format လုပ်နည်း
(ကသာမန်မှတ်ဉာဏ်မြေပုံအဖြစ်အသုံးပြု) ကို Android နှင့် internal memory ပေါ် SD ကဒ်ကို disable လုပ်နည်း
တစ်ဦးနှင့် internal memory အဖြစ် SD ကမှတ်ဉာဏ်ကဒ်ကိုသုံးပြီး
ထူသင့်ရဲ့မှတ်ဉာဏ်ကဒ်ပေါ်မှာရှိသမျှအရေးကြီးသောဒေတာလွှဲပြောင်းရန်ကြိုးစားနေခြင်းမပြုမီ, ဘယ်နေရာမှာမဆို: လုပ်ငန်းစဉ်ထဲမှာလုံးဝ၏ format ဖြစ်လိမ့်မည်။
အောက်မှာဖေါ်ပြတဲ့အတိုင်းနောက်ထပ်လုပ်ရပ်များ (သင်သင်ရုံက installed နှင့်ထိုကဲ့သို့သောသတိပေးချက်ပြသလျှင်, အသစ်တစ်ခုကို SD က-card ကိုရှာဖွေတွေ့ရှိသောအကြောင်းကြားစာတွင် "Customize" ပေါ်တွင် click လုပ်နိုငျသညျ, အစားပထမဦးဆုံးနှစ်ဦးကိုပစ္စည်းများ၏) ဖြစ်ရလိမ့်မည်:
(အချို့ devices များတွင်, သိုလှောင်မှုရွေးချယ်စရာအမှတ်ထိုကဲ့သို့သော ZTE ကအဖြစ် "အဆင့်မြင့်" အောက်မှာရှာတွေ့နိုင်ပါသည်) သိုလှောင်ရေးနဲ့ USB-drives တွေကိုနှင့်ကို item "SD က-Card ကို" ပေါ်တွင် click လုပ် - Settings ကိုသွားပါ။
မီနူး (ထိပ်မှာညာဘက်ခလုတ်ကို), "Customize" ကိုရွေးချယ်ပါ။ မီနူးပေါ်တွင် "internal memory" ရှိလျှင်, လက်ျာဘက်ပေါ်မှာ click နှိပ်ခြင်းနှင့်ခြေလှမ်း3skip ။
သည် "internal memory" နှိပ်ပါ။
ဒါကြောင့်တစ်ဦးနှင့် internal memory အဖြစ်အသုံးပြုနိုင်မီကဒ်ပေါ်မှာရှိသမျှ data တွေကိုဖယ်ထုတ်ခြင်းခံရလိမ့်မည်ဟုသတိပေး Read, အနှိပ် "ကိုရှင်းလင်းရန်နှင့် format နဲ့။ "
သော - ထိုလုပ်ငန်းစဉ်၏အဆုံးမှာသင်မက်ဆေ့ခ်ျကို "SD က-Card ကိုနှေးကွေးဖြစ်ပါတယ်" မြင်ရပါလိမ့်မည်ဆိုပါကသင်ကမှတ်ဉာဏ်ကဒ်အတန်းအစား 4,6နှင့်တူသောသုံးပြီးဖြစ်ကြောင်းပြောပါတယ် တကယ်နှေးကွေးနေ။ ဒါဟာတစ်ဦးနှင့် internal memory အဖြစ်အသုံးပြုနိုင်ပါတယ်, ဒါပေမယ့်သူက (ထိုကဲ့သို့သောမှတ်ဥာဏ်ကတ်များသမားရိုးကျနှင့် internal memory ထက်နှေးကွေးကြိမ်မှ 10 ကြိမ်အထိ run နိုင်ပါတယ်) သင့်မှာ Android ဖုန်းသို့မဟုတ် Tablet ကို၏မြန်နှုန်းကိုထိခိုက်ပါလိမ့်မယ်။ ထိုသို့ UHS မှတ်ဥာဏ်ကတ်များသုံးစွဲဖို့အကြံပြုသည်အရှိန် class3(U3) ။
(လွှဲပြောင်းမှုလုပ်ငန်းစဉ်ပြည့်စုံစဉ်းစားမရမီ) ပုံစံပြီးနောက်, သငျသညျ "အခုဆိုရင်လွှဲပြောင်း" ဟုကို select အသစ်တစ်ခုကိရိယာဒေတာကိုပြောင်းရွှေ့ဖို့သတိပေးခံရလိမ့်မည်။
"Finish ကို။ " ကိုနှိပ်ပါ
ဒါဟာသင့်ရဲ့ဖုန်းသို့မဟုတ် Tablet ကိုပြန်လည်စတင်ရန်အတွင်းပိုင်းမှတ်ဉာဏ်အဖြစ်ကဒ်ပုံစံပြီးနောက်ချက်ချင်းအကြံပြုသည် - စာနယ်ဇင်းနှင့် "ပြန်တင်ရန်" ကိုရွေးပါထို့နောက်ပါဝါခလုတ်ကိုဖိထားပြီး, ဤမပါလျှင် - ထို့နောက် "ပါဝါပိတ်ထား" သို့မဟုတ် "ဟာ Off" နဲ့ကို turn off - device ကိုဖွင့်။
ဤလုပ်ငန်းစဉ်များတွင်ပြည့်စုံပင်ဖြစ်သည်: သင်ရွေးချယ်စရာကိုသွားလျှင် "သိုလှောင်မှုနဲ့ USB drives တွေကို," ထို့နောက်သင်နှင့် internal memory ထဲမှာသိမ်းပိုက်ရာအရပ်လျော့နည်းသွားသည်ဟုမြင်ရပါလိမ့်မည်, ထိုမှတ်ဉာဏ်ကဒ် - တိုးလာနှင့်မှတ်ဉာဏ်၏စုစုပေါင်းငွေပမာဏလည်းတိုးလာနေပါတယ်။
သို့သော်တစ်ဦးပြည်တွင်းရေးမှာ Android6မှာ memory နဲ့7အဖြစ် SD က-card ကိုသုံးပြီးရဲ့လုပ်ဆောင်ချက်, လက်တွေ့ဒီဖြစ်နိုင်ခြေ၏အသုံးပြုမှုကိုဖြစ်စေနိုင်ပါတယ်တချို့ features တွေရှိပါတယ်။
တစ်ဦးနှင့် internal memory ကို Android အဖြစ်မှတ်ဉာဏ်ကဒ်အကျင့်ကိုကျင့်၏အင်္ဂါရပ်များ
internal memory Android ဖို့ N ကိုပမာဏကိုပူးတွဲအခါမှတ်ဉာဏ်ကဒ် M က, အတွင်းပိုင်းမှတ်ဉာဏ်၏စုစုပေါင်းရရှိနိုင်ပါသည်စွမ်းရည် N ကို + အမ်ညီမျှဖြစ်သင့်ကြောင်းကျနော်တို့ယူဆနိုင်ပါတယ် ထို့အပွငျကအကြမ်းအားဖြင့်သတင်းအချက်အလက်သိုလှောင်ရေးကိရိယာထဲမှာပေါ်လာလိမ့်မယ်, ဒါပေမယ့်တကယ်တော့ဒါဟာကွဲပြားခြားနားအနည်းငယ်အလုပ်လုပ်တယ်:
(အချို့ applications များ, system ကိုမွမ်းမံမှုများ၏ချွင်းချက်နှင့်အတူ) ဖြစ်နိုင်သမျှသောရွေးချယ်စရာပေးခြင်းမရှိဘဲ, SD က-ကဒ်ပေါ်တွင်တည်ရှိပြီး, အတွင်းပိုင်းမှတ်ဉာဏ်အပေါ်ထားရှိပါလိမ့်မည်။
ဤကိစ္စတွင်အတွက်ကွန်ပျူတာတစ်ခုက Android device ကိုဆက်သွယ်တဲ့အခါမှာသင် "ကိုကြည့်ပါ" ဦးမည်သာကဒ်ပေါ်တွင် internal memory မှဝင်ရောက်ခွင့်ရှိသည်။ ဒါဟာ (။ Android အတွက်အကောင်းဆုံးဖိုင်မန်နေဂျာကိုကြည့်ပါ) device ကိုအပေါ်ဖိုင်မန်နေဂျာအတွက်အတူတူပင်ဖြစ်ပါသည်။
ရလဒ်အဖြစ် - ထို SD ကမှတ်ဉာဏ်ကဒ်တစ်ခုနှင့် internal memory အဖြစ်အသုံးပြုခဲ့ပါတယ်အခါအခိုက်အပြီး, သင် "စစ်မှန်သော" ပြည်တွင်းရေးမှတ်ဉာဏ်မှဝင်ရောက်ခွင့်ရှိသည်မဟုတ်ကြဘူး, ကြှနျုပျတို့၎င်း၏ကိုယ်ပိုင်ပြည်တွင်းရေး device ကိုမှတ်ဉာဏ်ပြီးနောက် internal memory ပမာဏကိုရရှိနိုင်ပါ, တစ်ဦး MicroSD memory ကိုထက်ပိုမိုခဲ့ကြောင်းယူဆပါလျှင် ဖော်ပြထားလှုပ်ရှားမှုတိုးမြှင့်ခြင်းနှင့်လျှော့မပေးပါဘူး။
နောက်ထပ်အရေးကြီးတဲ့အင်္ဂါရပ် - ဖုန်းကိုသငျသညျကနေဒေတာတွေကိုပြန်လည်နာလန်ထူဖို့တခြားအခြေအနေတွေထဲက check လုပ်ထားကြပါပြီရင်တောင်မှပြန်လည်စတင်ဖြစ်ပါတယ်, ဒီအကြောင်းပိုမိုရိနာစွဲမပြုမီကထဲကမှတ်ဉာဏ်ကဒ်ဖြစ်အဖြစ်မနိုင်: က၏ format တစ်ခု SD ကမှတ်ဉာဏ်ကဒ်ကနေဒေတာတွေကိုပြန်လည်နာလန်ထူဖို့ဖြစ်နိုင် Android ပေါ်မှာအတွင်းပိုင်းမှတ်ဉာဏ်အဖြစ်။
ထိုကဲ့သို့သော Samsung ရဲ့ Galaxy S7-S9, Galaxy Note အဖြစ် function ကိုမရရှိနိုင်ဘယ်မှာ Android ထုတ်ကုန်, ထိုသို့ ADB ကရှဲလ်သုံးပြီး internal memory အဖြစ် SD ကဒ်ကို format ဖို့ဖြစ်နိုင်ပါတယ်။
ဒီနည်းလမ်းကိုအလားအလာဖုန်းနှင့်အတူပြဿနာများဖြစ်ပေါ်စေနိုင်ပါသည် (သို့မဟုတ်မည်သည့်စက်ပစ္စည်းတွင်ဖြစ်ပေါ်နိုင်ပါသည်) သောကြောင့်, ADB က install လုပ်အပေါ်အသေးစိတ်အမှားရှာသင်ကမည်သို့လုပ်ဆောင်ရမည်ကိုမသိကြပါလျှင်ငါထို့နောက်, (လက်လွတ်ဖိုင်တွဲ adb အတွက် USB နဲ့ command line ကိုပစ်လွှတ်အပေါ်လှည့် ဖြစ်ကောင်းပိုကောင်းယူနှငျ့သငျယူလျှင်မရ - ။ ) သင့်ရဲ့ကိုယ်ပိုင်အန္တရာယ်မှာဖြစ်ပါတယ်။
မိမိတို့ကိုယ်ကိုအောက်ပါအတိုင်းလိုအပ်သောပညတ်တော်တို့ကို (ထိုမှတ်ဉာဏ်ကဒ်ချိတ်ဆက်ထားရပါမည်) နေသောခေါင်းစဉ်:
sm စာရင်း-disk တွေ (ထို disk ကိုအမှတ်အသားအမျိုးအစား disk ကိုထုတ်ပေးမှတ်စုများ, ဒီ command ၏ရလဒ်အဖြစ်: NNN, NN - သင်ကလာမယ့် command ကိုအတွက်မလိုအပ်ပါလိမ့်မယ်)
sm partition ကို disk ကို: NNN, NN ပုဂ္ဂလိက
ပုံစံအခါ adb shell ကိုဖြတ်, ပြီးပြည့်စုံသည်, ဒါပေမယ့်ဖုန်းပေါ်မှာ, စတိုးဆိုင်၌, အပြင်အဆင်များ, သည် "SD ကဒ်" ကိုနှိပ်ပါအပေါ်ဆုံးညာဘက်မှာ menu ကို button ကို click ပြီး "လွှဲပြောင်းဒေတာ" ကိုနှိပ်ပါ (ဒီမဖြစ်မနေဖြစ်ပါသည်, မဟုတ်ရင်အတွင်းပိုင်းကိုဖုန်းမှတ်ဉာဏ်ကိုသုံးဖို့ဆက်လက်) ဖွင့်လှစ်။ လွှဲပြောင်းမှုလုပ်ငန်းစဉ်များပြီးစီးပြီးစီးခဲ့သည်အပေါ်သို့။
ထိုကဲ့သို့သောကိရိယာအခါ Nalci အမြစ်-access ပြုလုပ်ရန်နောက်ထပ်ဖြစ်နိုင်ခြေ - ဤလျှောက်လွှာအတွက် Root Essentials ပလီကေးရှင်းကိုအသုံးပြုခြင်းနှင့်ပါဝင်မွေးစားသိုလှောင်မှု (ကအန္တရာယ်ရှိတဲ့စစ်ဆင်ရေးသင့်ကိုယ်ပိုင်အန္တရာယ်မှာအန်းဒရွိုက်ဗားရှင်းအဟောင်းပေါ်မှာ run ကြဘူး) ။
သငျသညျ, အတွင်းပိုင်းမှတ်ဉာဏ်ကနေမှတ်ဉာဏ်ကဒ်ကို disable ပြုလုပ်ရိုးရှင်းတဲ့လုပ်ရွေးချယ်ပါက - ကအားလုံးကိုအရေးကြီးဒေတာတွေနဲ့ဆွဲ, ပြီးတော့သွား, အဖြစ် SD က-card ကို setting တွင်ပထမဦးဆုံးနည်းလမ်းဖြစ်သည်။
"အိတ်ဆောင်မီဒီယာ" ကိုရွေးချယ်ပါနှင့်ညွှန်ကြားချက်များကိုမှတ်ဉာဏ်ကဒ်ကို format မှအောက်ပါ။